Onyankopɔn Ahenni​—Wosua Bible a, Wobɛhu Nea Enti a Ɛsɛ sɛ Ɛhia Wo
Ɔwɛn-Aban | October 2014
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Zande Zulu
ASƐM A ƐDA SO | ONYANKOPƆN AHENNI—ADƐN NTI NA ƐSƐ SƐ ƐHO HIA WO?
Onyankopɔn Ahenni—Nea Enti a Ɛsɛ sɛ Ɛho Hia Wo
Yɛreka ba yi nyinaa, ebia woahu sɛ Onyankopɔn Ahenni no ho hia Yehowa Adansefo paa. Bere a wohuu nhyira a Onyankopɔn Ahenni de bɛba daakye no, ɛbɛyɛ sɛ w’ani gyei. Nanso, ebia na wonhu sɛ saa bɔhyɛ no bɛbam anaasɛ ɛremma mu.
Sɛ saa na ɛyɛ wo a, mma no nhaw wo, efisɛ wote biribi a, ɛsɛ sɛ wohwehwɛ mu yiye ansa na woagye adi. (Mmebusɛm 14:15) Biribi saa na tete Beroiafo nso yɛe. * Bere a wɔtee Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no, wɔgye toom. Nanso, ɛnyɛ sɛ na ɛyɛ wɔn asom dɛ kɛkɛ ntia. Mmom, na wɔto wɔn bo ase hwehwɛ Kyerɛwnsɛm no mu “hwɛ sɛ nsɛm no te saa anaa.” (Asomafo Nnwuma 17:11) Ɛno kyerɛ sɛ Beroiafo no de asɛmpa a wɔtee no totoo Kyerɛwnsɛm no ho. Ɛno maa wɔhuu sɛ asɛmpa a wɔtee no fi Onyankopɔn Asɛm mu ampa.
Yehowa Adansefo ani bɛgye ho sɛ wo nso wobɛyɛ saa. Yɛne nkurɔfo sua Bible a yɛnnye sika. Enti sɛ wopɛ a, yɛbɛboa wo ama wode nea Yehowa Adansefo ka fa Onyankopɔn Ahenni ho no atoto nea Bible kyerɛkyerɛ no ho.
Sɛ wosua Bible a, ɛnyɛ Onyankopɔn Ahenni no ho ade nko ara na wobɛhu. Wobɛsan anya nsɛmmisa a ɛho hia paa no ho mmuae. Ebi ni:
Ɛyɛɛ dɛn na yɛbaa wiase?
Dɛn nti na yɛwɔ wiase?
Adɛn nti na Onyankopɔn ma yɛhu amane?
Yɛwu a, ɛhe na yɛkɔ?
Asase yi bɛsɛe anaa?
Dɛn na ɛma anigye ba abusua mu?
Wosua Bible a, mfaso kɛse a wobɛnya ne sɛ, ɛbɛma ‘woabɛn Onyankopɔn.’ (Yakobo 4:8) Sɛ wobɛn Onyankopɔn a, wobɛhu sɛ Onyankopɔn Ahenni no bɛma woanya nneɛma pa pii nnɛ de akosi daa. Bere a Yesu rebɔ n’Agya mpae no, ɔkaa sɛ: “Eyi ne daa nkwa, sɛ [wɔbɛhu] wo, nokware Nyankopɔn koro pɛ no, yiye, ne nea wosomaa no no, Yesu Kristo.”—Yohane 17:3.
^ nky. 4 Ná Beroia yɛ kurow a ɛwɔ tete Makedonia.
Nea Enti a Onyankopɔn Ahenni Som Bo Ma No
Folake yɛ abaayewa a wadi mfe du. Nnansa yi ara, wɔmaa no dwumadi wɔ sukuu sɛ ade a n’ani gye ho paa wɔ wiase no, ɔnkyerɛw ho asɛm. Folake kyerɛw nea enti a n’ani gye ho sɛ ɔbɛka Onyankopɔn Ahenni ho asɛm akyerɛ nkurɔfo.
Ɔkyerɛwee sɛ, “Onyankopɔn Ahenni yɛ aban ankasa. Nanso wontumi mfa w’ani nhu. Wohyɛ ahwehwɛniwa mpo a, worenhu!”
Nhyira a Ahenni no de bɛba no, Folake kyerɛw emu nea n’ani gye ho paa ho asɛm. Ɔtoaa so kaa ɔhaw a Ahenni no bɛyi afi hɔ no bi ho asɛm. Ɔkyerɛwee sɛ: “Sɛ mehu sɛ nkurɔfo deda abɔnten, na ɔkɔm kunkum mmofra wɔ wiase baabiara a, ɛma me werɛ how paa. Nanso sɛ mekenkan Yesaia 65:21 a, na m’ani asan agye.” Nnipa a Onyankopɔn Ahenni bɛdi wɔn so no, saa Kyerɛwsɛm no ka wɔn ho asɛm sɛ: “Wobesisi adan atena mu na wɔayeyɛ bobe nturo adi mu aba.”
Folake san kyerɛwee sɛ ɔretwɛn bere a Onyankopɔn nam n’Ahenni no so bɛyi nyarewa nyinaa afi hɔ. Ɔde Adiyisɛm 21:4 baa n’asɛm no mu. Ɛhɔ ka sɛ Onyankopɔn bɛpopa nnipa “aniwam nusu nyinaa, na owu nni hɔ bio, na awerɛhow ne osu ne yaw nso nni hɔ bio.” Bere a Folake rewie n’asɛm no, ɔka sii so dua sɛ ade a n’ani gye ho paa wɔ wiase ne sɛ ɔbɛka Yehowa ne n’Ahenni ho asɛm. Abaayewa yi asɛm ma yɛhu no pefee sɛ Onyankopɔn Ahenni da ne koma so paa!
Ɛhe na Yebenya Nsɛmmisa a Ɛho Hia Paa no Ho Mmuae?
W’adwene yɛ wo sɛ nyansahu, nyansapɛ, anaa Bible?
Hwɛ Bible adesua ho nsɛm a nkurɔfo taa bisa ne ɛho mmuae.
ASƐM A ƐDA SO Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Onyankopɔn Ahenni Ho Hia Wo?
ASƐM A ƐDA SO Onyankopɔn Ahenni​—Nea Enti a Ɛho Hia Yesu
ASƐM A ƐDA SO Onyankopɔn Ahenni​—Nea Enti a Ɛsɛ sɛ Ɛho Hia Wo
YEHOWA DANSENI BI NE OBI BƆ NKƆMMƆ Bere Bɛn na Onyankopɔn Ahenni Fii Ase Dii Tumi?​—Ɔfã 1
BIBLE TUMI SESA NNIPA Me Nko Ara Me Ho na na Medwene
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN October 2014 | Onyankopɔn Ahenni—Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Ɛho Hia Wo?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN October 2014 | Onyankopɔn Ahenni—Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Ɛho Hia Wo?
October 2014 | Onyankopɔn Ahenni—Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Ɛho Hia Wo?
ƆWƐN-ABAN October 2014 | Onyankopɔn Ahenni—Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Ɛho Hia Wo?